Isitudiyo esibanzi kwiPulody 43.
Dushanbe, Districts of Republican Subordination, Tajikistan
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFerouz
I-studio ebanzi, i-46 sq.m. I-wi-fi yasimahla. I-Dushanbe mall ingaphesheya kwesitrato kunye ne-Auchan hypermarket kunye neNkundla yoKutya. Intabalala yokutya kunye nokhetho lwegrosari. Iindawo zokutyela ezininzi kwisitrato saseDrujba Narodov-ibhloko enye kude (imizuzu eyi-10 ukuhamba). Kukho ivenkile yekofu enepastry entsha kumgangatho osezantsi.
Indlu ebanzi (46 sq/m) eneTV yesathelayithi, i-fiber-optic internet kunye neMountain View entle. Kukho ikhitshi elikhulu kunye nekona yokutyela. Ukuba uthanda ukupheka, ke yindawo efanelekileyo. Imigangatho yokufudumeza kunye nebhafu.
4.93 out of 5 stars from 46 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-46
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi46
Indawo esembindini yokuthenga, ukutya kunye nokubona indawo. IDushanbe mall ingaphesheya kwesitrato, iindawo zokutyela ezininzi ezilungileyo, iikhefi kunye neebhari ziphakathi kwemizuzu eli-10 yokuhamba. I-Alisher Navoi Park iphakathi kweemitha ezingama-200. I-Rudaki Avenue kunye nePaki yeFlegi yimizuzu eyi-10-15 ukuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Ferouz
Friendly and easy going . Love soccer and extreme sports such as mountain hiking and white water rafting. Love traveling around the world too, either on business or for leisure.
Siyafumaneka kulo naluphi na uncedo kwiindwendwe njengoko sihlala kufutshane.
Iilwimi: English, Русский
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dushanbe